Kune avo vashandisi vatsva kuLinux iwe unofanirwa kuziva izvo Linux inonyorwa nenzira yakatosiyana pane dhairekitori dhizaini raungangoshandiswa kubva kuWindows.
Mune chinyorwa chakapfuura takataura nezve mamwe madhairekitori makuru izvo zvinoumba hutongi mukati meLinux. Uye ino nguva isu ticha taura nezve vamwe vamwe vandinofanira kutaura mu chinyorwa chapfuura.
1 / kurasikirwa + kwawanikwa
2 / midhiya inobviswa media media
3 / mnt - kwenguva pfupi mount point
4 / opt
5 / proc kernel mafaera uye maitiro
6 / mudzi - mudzi dhairekitori
7 / mhanya
8 / sbin system manejimendi manejimendi
9 / srv data sevhisi
10 / tmp dhata dhata
11 / usr mushandisi mabhinari mafaira uye kuverenga-chete data
12 / var kusiyanisa dhata
/ kurasikirwa + kwawanikwa
Yese Linux faira system ine yakarasika + yakawanikwa dhairekitori. Kana system yakaturika, bhuti rinotevera rinotarisa iyo faira system.
Uye munhu wese mafaera akaora akawanikwa panguva ye system cheki anoiswa mune yakarasika + dhairekitori, kuitira kuti iwe ugone kuyedza kudzoreredza yakawanda data sezvinobvira.
/ midhiya inobviswa media media
Dhairekitori iri rine subdirectories, umo l akaiswaMidhiya ezvigadzirwa zvakabatana nekombuta.
Semuenzaniso, kana iyo USB drive ikaiswa mune yako Linux system, mune dhairekitori inozozvigadzirira yega folda yayo. Iwe unogona kuwana zvirimo mukati me USB nekupinda mune ino dhairekitori.
/ mnt - kwenguva pfupi mount point
Dhairekitori iri ine ekunze mafaira masisitimu akaiswa.
Masangano anoonekwa mukati / mnt anomiririra zviwanikwa zvekunze zvinogona kuwanikwa kuburikidza nedhairekitori iri.
Dhairekitori iri ine zvinyorwa zvidiki zvemamwe mapakeji. Iyo inowanzo shandiswa kuchengetedza mamwe mafaera ezvirongwa zvakaiswa pane ino sisitimu.
/ proc kernel mafaera uye maitiro
Iyo / proc dhairekitori yakafanana ne / dev dhairekitori, nekuti haina chero yemafaira akajairwa. Ine mafaera akasarudzika anomiririra system uye ruzivo rwekugadzirisa.
/ mudzi - mudzi dhairekitori
Dhairekitori iri ndiyo dhairekitori remudzi mushandisi (/ imba / mudzi). Iwe unofanirwa kusiyanisa dhairekitori iri kubva /, unova mudzi wedhairekitori system.
Dhairekitori iri inotipa zvikumbiro nenzvimbo yakajairika yekuchengetera mafaera apfuurapamwe nemaitiro ekuzivisa uye zvigadziko. Zvakare pamwe nemafaira asingakwanise kuchengetwa mu / tmp, nekuti mafaera mu / tmp anogona kubviswa.
/ sbin system manejimendi manejimendi
Dhairekitori iri yakafanana ne / bin dhairekitori, sezvo iine anodiwa mabhainari mafaera ayo angangoshandiswa nemushandisi wemidzi yehurongwa hwehutongi.
Ese madhairekitori aya (/ sbin, / usr / sbin uye / usr / emuno / sbin) anoshandiswa kuitisa hutongi, nekudaro iye chete maneja anogona kumhanyisa zvirimo.
/ srv data sevhisi
Iri dhairekitori cine data yemasevhisi anopiwa nehurongwa, muenzaniso unoshanda weiyi ndewekuti iyo Apache HTTP server inoshandiswa kushanda nemawebhusaiti
/ tmp dhata dhata
Chitoro chekushandisa zvenguva pfupi mafaera mu / tmp. Aya mafaera anowanzo bviswa apo sisitimu painotangazve.
/ usr mushandisi mabhinari mafaira uye kuverenga-chete data
Iyo / usr c dhairekitoriine zvinoshandiswa uye mafaera anoshandiswa nevashandisi.
Somuenzaniso, Izvo hazvidi kuita kuti mashandiro eesystem ashandiswe sezvo akachengetwa mu / usr / bin dhairekitori pane ye / bin dhairekitori, uye mabhaariari anodikanwa ehurongwa hwehurongwa haana kuchengetwa mu / usr / sbin dhairekitori pane / sbin.
Raibhurari dzechishandiso chega chega dzakachengetwa mu / usr / lib dhairekitori uye / usr zvakare ine mamwe maforodha, semuenzaniso, maumbirwo emafaira akazvimirira, senge magirafu, akachengetwa mu / usr / share.
Mune iyo / usr / dhairekitori remuno maapplication acho anowanzoiswa munzvimbo dzakanyorwa nekuti hazvitadzise iyo yese system.
/ var kusiyanisa dhata
Dhairekitori iri ichave nemafaira e data anoshanduka uye echinguva, pamwe ne mafaera e spool (mafaera akachengetwa mumutsara akamirira kuitwa, senge mitsara yekudhinda).
Ese matanda ehurongwa neaya anogadzirwa nemasevhisi akaisirwa ari mukati mechimiro chechimiro che / var. Izvi zvinoreva kuti hukuru hwese dhairekitori iri rinoramba richikura.
Kubatsira kwe / var kunoreva kugona kuona matambudziko kuitira kudzivirira nekugadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Iyo Linux faira system dhizaini inogadzirwa sei? - Chikamu 2
Chinyorwa chakanaka kwazvo. Wakamboona iyo / Palo dhairekitori. Chii ichocho?